INkonzo yabaThengi bezeNtlalontle | Martech Zone
INkonzo yabaThengi bezeNtlalo yeeMarket
NgoLwesine, uJuni 19, 2014 NgoLwesithathu, Juni 18, 2014 Douglas Karr
Inkonzo yabaThengi YINTENGISO. Ndiza kuyithetha kwakhona… inkonzo yabathengi NGOKUTHENGISA. Kungenxa yokuba indlela ophatha ngayo abathengi bakho iyonyuselwa kwimithombo yeendaba zentlalo, ukulinganiswa kunye nokuphononongwa yonke imihla, inkonzo yakho yabathengi ayisosalathiso sokwaneliseka kwabathengi, ukugcinwa okanye ixabiso. Abathengi bakho ngoku yingalo ephambili kuyo yonke imizamo yakho yentengiso kuba babelana ngokulula kwi-Intanethi.
Ngelixa iiNtengiso zamaQela zijolise ekwandiseni ulwazi lwebrand kunye nokukhokelela kwisizukulwane ngokukhupha ulwazi kunye nokudala ukubandakanyeka okuhle, iiTeam zeNkonzo yaBathengi zijolise ekuphuculeni ukoneliseka kwabathengi kunye nokwandisa ukugcinwa kwabathengi ngokumamela, kunye nokuphendula kwiimfuno zabathengi. Indlela abahlangana ngayo bobabini ihlala ibonakala njengomngeni phakathi kwemibutho emininzi. Umthombo: Sentiment
Ngelixa i-60% yeenkampani zikholelwa ukuba amajelo asekuhlaleni ayindlela nje yokuthengisa, bayayityeshela into yokwandiswa kwegama labo abaxhasi babathengi okanye abagxeki. Konke okudingayo ukuze kuphelise iinyanga okanye iminyaka yomsebenzi onzima wokwakha ukuthembana, igunya, kunye nokunxibelelana ngokweemvakalelo nabaphulaphuli bakho kukungasisebenzisi kakuhle isiganeko esinye esipapashiweyo nesikhuthazwa kwimidiya yoluntu. Ungachacha ngokufanelekileyo… kodwa ungaze ulibale ukuba iinkonzo zabathengi is ngoku yinto ephambili kwisicwangciso sakho sokuthengisa ngokubanzi.
tags: ku khuthazaukuxhasaInkonzo eyenzelweumgxekiukugcinwaukukhuthaza intlaloinkonzo yabathengi kwezentlalo
Iikhompyuter ze-Icon Photoshop ye-iOS kunye ne-Android